Izinjini zokusesha zishintsha ama-algorithms azo cishe nsuku zonke futhi lezi zinguquko azihle zihlale zihle kubaxhumanisi bewebhu nababhulogi. Kukhona njalo ithuba lokuthi iwebhusayithi yakho izovinjelwa ngenxa yezinqubomgomo ezintsha zokusesha injini. Ngaphezulu kwalokho, imiphumela yabo yokusesha ye-geo kanye nokwenza ngokwezifiso kungenzeka kuthinteke - management of stored grain with aeration. Kuhle ukuvimba amawebhusayithi amaningi kusuka kumiphumela yokusesha ye-Google, Bing, ne-Yahoo ukuze amakhasi akho ewebhu avele kalula. UJason Adler, iMenenja Yokuphumelela Kwekhasimende Semalt , uthi ngokubonga, kunezindlela ezithile zokuvimbela amawebhusayithi athile emiphumeleni yokusesha. Ezinye zazo zixoxwe ngezansi.